त्रिसुलीबाट जिवितै उद्दार गरिएका बिनयको बयान, छोरालाई तातो दुध खुवाएर, जेठो छोरो मैले च्यापे भने कान्छो जमुनाले, त्यसपछि त्रिसुलीबाट बगेम ! – Etajakhabar
होटलमा दिनहुँ सयौं मान्छे आउँछन्–जान्छन्। को कहाँको कता जान लागेको भने केही पनि सोधिनँ। एकछिनपछि ‘मान्छे बगा यो–बगा यो’ भन्ने हल्लाखल्ला आयो। मेरी बहिनीका छोराहरू कायक चलाउँथे। हत्तपत्त उनीहरू कायक लिएर दगुरे। केही बेर तल पुगेपछि केटाहरूले बूढाबूढीलाई समातेर निकालेछन्। बच्चाहरू फेला परेनन्। उनीहरू त्यही दम्पती रहेछन्, केही बेरअघि यही बसेर बच्चालाई दूध खुवाएर गएका थिए। (भक्कानिँदै) पानीमा ती बच्चाहरूलाई कस्तो भयो होला ? कति नि सा स्सिए होलान् ? बरु बच्चा यही छाडेर गइएको भए मै पालिदिन्थें। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा सुवास गोतामे/ मनीष दुवाडी लेखेको यो समाचार हामीले साभार गरेका हौ ।
Posted on: Saturday, January 18, 2020 Time: 12:44:19
-17280 second ago
-16213 second ago
-15666 second ago
-11930 second ago
-9645 second ago
-8779 second ago
-6975 second ago